हिरो त उदाए ? तर साम्राज्ञीसँग को ? « Mazzako Online
हिरो त उदाए ? तर साम्राज्ञीसँग को ?
अभिनेता राजेश हमालपछि केही अभिनेताहरुको आगमन नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भएपनि स्टारडमको भने भ्याकुम नै लाग्यो । हिरोको अनुहार हेरेरै फिल्म चल्छ भन्ने अवस्था खासै आएन । निखिल उप्रेती, विराज भट्ट जस्ता अभिनेता भारततर्फ लाग्दा स्टारडमको खडेरी अझै चुलिएको थियो ।
आर्यन सिग्देल, जीवन लुइटेल जस्ता कलाकारले थोरैमात्र फिल्म नगरी टिकाउन खोजेपनि लामो समय उनीहरु चलेनन् । स्टारडमको भ्याकुम राम्रैसँग चल्यो । तर, अहिले एकपछि अर्का अभिनेताहरु आउँदा उनीहरुको अनुहार हेरेरै फिल्म चल्ने समय आएको छ । अनमोल केसीले सुरुवात गरेको यो सिलसिलामा प्रदिप खड्का, पल शाहदेखि सलिनमान बनियाँले अगाडि बढाउने देखिएको छ । हिरोहरुको खडेरी विस्तारै पुर्ती हुँदैछ ।
तर, अभिनेत्रीमा भने अब को भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अभिनेत्रीमा अहिले साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह मात्र अगाडि देखिएकी छिन् । दुइवटा फिल्म बम्पर हिट दिएपछि साम्राज्ञी लामो रेशको घोडा बन्ने पक्का छ । तर, साम्राज्ञी जस्तै फिल्ममा देखिने वित्तिकै दर्शक हलसम्म तान्न सक्ने अर्की अभिनेत्री भने देखिएको छैन । अभिनेत्री आना शर्मालाइ धेरैले स्टारडम बोक्न सक्ने अभिनेत्रीको रुपमा हेरेतापनि आनाले त्यो संभावनालाइ अगाडि बढाउन सकिनन् । अन्य अभिनेत्रीहरु वैकल्पिक रुपमा मात्र देखिएका छन् ।